Buugga Arammida Dahsoon | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdullaahi Samoow — March 15, 2020
Buugga Arimmada Dahsoon ee uu qoray Saaxibkeey Maxamed C/Risaaq Diiriye, waxa uu bulshada u ifinayaa muhiimadda ay leedahay in qofka lagu qiimeeyo waxa uu yahay aanse lagu Miisaammin muqaalkiisa.
Waa buuggi ugu horeeyay ee Af-Soomali ku qoran oo ka hadlaya caqabadaha dadka gaaggaaban haysta. Waa buug soo gudbinaya sooyaallo iyo dhacdooyin qiiro leh oo uu la kulmay qorraaga iyo dadka isaga lamidka ah ee ku nool Soomaaliya iyo dunida inteada kale.
Qoraaga qoray Buugga Aramida Dahdoon waa Maxamed Cabdirisaaq Diriye. Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Wuxuu wax ka qoraa cilmiga Bulshada, nabadda iyo amniga, siyaasadda, sooyaalka, arrimaha bulshada, xallinta khilaafaadka, dhaqanka, Afka iyo aqoonta guud ahaaneed. Wuxuu bartay cilmiga Bulshada, nabadda iyo amniga. Heerka koowaad wuxuu bartay cilmiga bulshada (Sociology), heerka labaad ee jaamacada (Master degree) wuxuu bartay Nabadda iyo Amniga ‘Peace and Security. Siddoo kale qoraaga ayaa soo bartay cilmiga sheybaarka. Qoraagu wuxuu bare sarre ka ahaa jaamacada Bariga Afrika.
Qorraaga buuggan Maxamed C/Risaaq Diiriye waa aqoonyahan dhalinyaro ah, usoo joogay dhacdooyin isugu jira murrugo iyo farxad, maanta na nolosha ka gaaray heer wanaagsan, Taariikh diisa waxa aynu ka baran sida ay muhiim u tahay waxbarashada iyo go’aan qaadashada si aad uga dhabeyso hankaada. Waxa uu uga hadlayaa Buuggan noloshii baadiyaha iyo dadaalkiisi waxbarasho ee uu kusoo gaaray heerka uu maanta joogo.
Buugga waxa uu soo gudbinaya dhibaatada ay dadka gaaggaaban kala kulmaan dadka kale sida Muuq Takoorka, Yasida, Ceebaynta, iwm. Waxa uu sidoo kale soo gudbinaya caqabadaha bulshada gaaggaaban ka haysta dhanka Guurka. Waxaa buugga aan ka marnayn sugaanta Soomaalida maansooyin, hadal haysyo bulsho, sheeko dhaqameedyo iyo Taariikhda dadka gaaggaaban dunida ku leeyihiin.
Sheekooyinka isoo jiitay waxaa kamid ah, Bari baa laba reer so kala dhex gashay xaajo dhiig ah. Reerkii dhiiga laga galay waxaa loo diray ergo, si looga hortago dagaal nabaddana loo xoojiyo, wadahadal kaddib waxaa lagu balamay kulan guud oo labadda dhinac ka yeeshaan arinta dilka. Maalintii kulan waynaha lagu ballansanaa, odayaasha labada dhinac waxay wada aadey geedkii lagu ballamay.
Sidii hadba qof u imaanayey, waxa ay u ekaatay in la dhan yahay, reerkii qofka laga dilay waxa ay dhaheen waa dhan nahay hase yeeshee reerkii kale waxa ay dhaheen nin baa naga maqan la’aantiisna wax ma bilaabi karno.
Ninka maqan waa Oday Garrame, oo ah guurtida ugu culus ee reerka dilka geystay, waxuu kamid yahay duqeyda loo keeno xaajada dhaqan iyo dhiigba ee laga quusto oo laxalin waayo. Oday Garrame aad buu tolka muhiim ugu yahay marka ay timaado xalinta khilaafaadka, waa nin lagu tashanayey.
Oday Garrame waxaa maalinta qabsatay xaajo qoys, oo waxaa la waayay gabadhiisa Isniino, oo subaxdi lagu yiri ariga korbaxada ah orod la joog, waqtigi aad buu u dheeraaday, duhur ku dhawaad, Oday Garrame gabadhii mahayo, duqeydiina isaga bay sugayaan.
Goor la kala caajisay una muuqato in lagu kala tagi doono kulanka, ayaa waxaa soo muuqday “nin, waa nin gaaban, oo madow, oo foolxun, lafo ahaan, jir ahaan iyo hilib aahnba u yar” Ilaa uu soo dhawaaday, lama garan karin, duqeydii waxa ay is yiraahdeen malaha waa wiil yar oo eeriyada xoolo la jooga. Reerki dilka gaystay waxay dhaheen waa kan ninkaan sugaynay. Oday Garrame markuu geedki yimid ayaa nin meesha fadhiyay yiri ” Ma ninkaan gaaban oo cilinkii malooke baad ilaa sakey nala sugeyseen? Intaan cid kale hadal, Oday Garrame inta uu ushiisii jifadeeda dhulka ku dhuftay ayuu yiri ” Adeer Ragga La Ma Rarto La Mana Qasho. !!!
* Umadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in Alle SWT ka cabsadaan, dadku dhamaantood waa abuurka Alle SWT isaga ayaa sidaa u naqshadeeyay. Ha iska daayeen Muuq takoorka iyo Yasida bulshada qaar, waxa ay qabsan karaan wax walba oo kan dheeri qabsan karo. Qofku waa in aan ku qiimeyno Garaadkiisa iyo Kartidiisa ee aan ku qiimeyn muuqiisa iyo sida uu Alle SWT u sameeyay.
“Waan Gaabnahay ee Ma Garaad La’i” – Hurre Walanwal.
* Waxaan Umadda Soomaaliyeed ee Aqriska jecel ugu baaqi inay ka faaideeystaan buuggan qiimaha badan, kana qeyb qaataan wacyigelinta Bulshada.
Tags: Buugga Arimmada Dahsoon
Next post Dameerkii Doqonka Ahaa iyo Libaaxii Xeeladda Badnaa
Previous post Amaankaaga Sug Laakiin Iska illaalI Fikirkaaga: Sida Looga Hortago in Koronafayrus ay Noloshaada La Wareegaan!